30 / 04 / 2021 30 / 04 / 2021 ခရစ် Wharfe 783 Views စာ0မှတ်ချက် BIONICLE သူရဲကောင်းများ, Lego, Lego ဟယ်ရီပေါ်တာနှစ် 1-4, Lego Marvel စူပါသူရဲကောင်းများ 2, Lego Star Wars, Lego Star Wars: Skywalker Saga, Lego ကမ္ဘာ, LinkedIn တို့, Star Wars, TT အားကစားပြိုင်ပွဲ, တွစ်တာ, ဗွီဒီယိုဂိမ်း, ဗီဒီယိုဂိမ်းများ, YouTube ကို
TT Games ၏ဒီဇိုင်းခေါင်း Arthur Parsons - ခေါင်းစဉ်များပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်ခဲ့သူဖြစ်သည် Lego Batmanဖြေ။ Lego Star Wars: Skywalker စစ်ကိုင်း - ၂၂ နှစ်ကြာပြီးနောက်စတူဒီယိုမှထွက်ခွာခဲ့သည်။
အဆိုပါဝါရင့်ဂိမ်းဒီဇိုင်နာအပေါ်ကြေညာခဲ့သည် တွစ်တာ သူဟာ TT Games မှာစတူဒီယိုအားလုံးနီးပါးအတွက်တာဝန်ယူရတဲ့နေရာကနေနုတ်ထွက်သွားတာပါ Lego မူရင်းကတည်းကဗီဒီယိုဂိမ်း Lego Star Warsဖြေ။ ။
"ကျွန်တော့်မှာအမှတ်တရတစ်သက်တာအကောင်းဆုံးကစားသမား ၃၀ နဲ့ဒီထက်ကောင်းတဲ့ကစားပွဲတွေမှာအလုပ်လုပ်ရတာမှတ်မိနေတုန်းပါပဲ" ဟုသူကပြောသည်။ "ဒါဟာအံ့သြစရာကောင်းတဲ့ခရီးတစ်ခုပါ။ နှစ်တွေတစ်လျှောက်မှာကျွန်တော်ရရှိခဲ့တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
"ငါဖြစ်ကောင်းများစွာသောအဲဒီမှာရှိပါတယ်အမှတ်တရများနှင့်အတူ YouTube ကိုရုပ်သံလိုင်းဖြည့်နိုင်! ကျွန်ုပ်၏မိသားစုမိသားစုကိုစွန့်ခွာရန် ၀ မ်းနည်းမိသည်။ အချို့သည်ကျွန်ုပ်နှင့်ထိထိရောက်ရောက်ကြီးပြင်းလာခဲ့ကြပြီးများစွာသောသူတို့ရှင်သန်ကြီးထွားခဲ့ကြသော်လည်း၊ အနာဂတ်မည်သို့ပင်ရှိပါစေကျွန်ုပ်စိတ်လှုပ်ရှားမိသည်။ တစ်စိတ်ကူးစီးနင်းများအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ "
မယုံနိုင်လောက်အောင် ၂၂ နှစ် Tt Games မှာဒီနေ့အလုပ်လုပ်ပြီးနောက်ငါ့နောက်ဆုံးနေ့ပဲ။ ကျွန်ုပ်သည်အမှတ် ၃၀ သို့မဟုတ်အကောင်းဆုံးတောက်ပသောဂိမ်းများတွင်အကောင်းဆုံးလူများနှင့်အတူအလုပ်လုပ်နေသည့်အမှတ်တရများ။
ဒါဟာအံ့သြစရာကောင်းတဲ့ခရီးတစ်ခုပါ။ နှစ်တွေတစ်လျှောက်ကျွန်မမှာရှိတဲ့အခွင့်အလမ်းတွေရှိခဲ့လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ 1/2
- arthur parsons (@arthur_parsons) ဧပြီလ 30, 2021
၏စာရင်း Lego video games Parsons သည်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲသူ BIONICLE Heroes နှင့်အတူ ၂၀၀၆ ခုနှစ်အထိလမ်းပိုင်းများ၌ပါ ၀ င်ခဲ့သည်။ အားဖြင့် Lego ဟယ်ရီပေါ်တာသူသည် ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်မှ ၁ နှစ်မှ ၄ နှစ်အတွင်း Game Director ၏အခန်းကဏ္ to မှဘွဲ့ရရှိခဲ့ပြီး ၂၀၁၇ ခုနှစ်ဒီဇိုင်း၏ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာခဲ့သည် Lego ကမ္ဘာနှင့် Lego Marvel စူပါသူရဲကောင်းများ2။
Parsons 'အရ LinkedIn တို့ ပရိုဖိုင်းသည် TT Games တွင်သူ၏လတ်တလောအခန်းကဏ္thatမှာထိုဌာန၏ဒီဇိုင်း ဦး ဆောင်သူဖြစ်သည်city on Lego Star Wars: Skywalker စစ်ကိုင်း။ ကျွန်တော်တို့ဟာစိတ်အားထက်သန်စွာမျှော်လင့်ထားသည့်ခေါင်းစဉ်ကိုထုတ်လွှင့်ဖို့လအနည်းငယ်သာလိုတော့တာကြောင့်ဒီအဆင့်မှာထွက်ခွာခြင်းဟာဂိမ်းရဲ့ကျယ်ပြန့်တဲ့အရှိန်အဟုန်ဟာပြီးသားဖြစ်ကြောင်းပြသနိုင်သလို၊ …
ယခုနှစ်မေလစတုတ္ထကမ်းလှမ်းချက်များအားလုံးကိုခြေရာခံပါ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်ကပ်အပ်နှံစာမျက်နှာနှင့်ထိုအလုပ်ကိုထောကျပံ့ Brick Fanatics သင့်ရဲ့ဝယ်ယူခြင်းဖြင့်ပါဘူး Lego Star Wars အစုံ ငါတို့တ ဦး တည်းမှတဆင့် တွဲဖက်လင့်ခ်များ.
← LEGO Harry Potter Hogw ကိုပေါင်းစပ်ခြင်းartအတိတ်, ပစ္စုပ္ပန်နှင့်အနာဂတ်၏ s ကို
LEGO NINJAGO Reimagined သည်ဒုတိယဇာတ်လမ်းတွဲတွင်ရွှေကိုရရှိသည် →